Onye nchekwa na-enweghị onye ọrụ: Oge Iji Dị Ajọ (A10002) | Ngwọta OMG
A na-akpọ ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-eme iche na ndị ọrụ ndị ọzọ na-anọghị nso ma na-eduzi ya dị ka onye ọrụ naanị ya. A na-achọkarị ha ka ha rụọ oke ọrụ dị oke egwu ma dịkwa oke egwu, ọtụtụ ọrụ na ọrụ ha na-arụ nwere ike itinye ndụ ha nnukwu. Seriousbụ onye dị mkpa n'ihe banyere ndị ọrụ nchekwa yana ahụike ka dịkwa ndị ọrụ mkpa ịrụ ọrụ na mpaghara ndị a dị ize ndụ. A na-ahụkarị ndị ọrụ na-enweghịzi ihe ọghọm nke ụbọchị dị iche iche ma na-enwekarị onye na-enyere ha aka. Ọ dị mma ịmata ụdị nchekwa ọrụ nke nzukọ na-arụ, ma ha na-arụ ọrụ usoro ma ọ bụ na usoro teknụzụ. Usoro akwụkwọ ntuziaka nwere ike ịgụnye ịkpachara anya na ilele gburugburu gị, ebe enwere mmerụ ahụ ị nwere ike ịnweta ọgwụgwọ mbụ maka onwe gị ma ọ bụ kpọọ ụgbọ ihe mberede. Ofzọ a iji hụ na nchekwa bụ usoro ochie etinyere ma jiri ya rụọ ọrụ n’oge tupu arụpụtara teknụzụ. Ọ na-adịkarị mkpa ịma usoro nchekwa nke nzukọ na-agba.
Ndị ọ bụla na-arụrụ ọrụ kwesịrị ịchọpụta ma ha nwere sistemụ ntuziaka ma ọ bụ sistemụ teknụzụ. Maka sistemụ na-adịghị agba ọsọ, ndị ọrụ ha nwere ike ịnọ n'ihe egwu dị elu ebe ọ bụ na nsogbu nwere ike ịdakwasị ha n'oge ọ bụla. O nwere ike mechaa gbuo ha ma ọ bụ chụpụ ha kpamkpam ka ha ghara inwe ike ịrụ ọrụ. Maka ndị were ọrụ kwenyere na ha enweghị usoro nchekwa ha nwere ike iji usoro ndị a wee bịakwute ihe ize ndụ ndị ọrụ ma nye ndị ọrụ ọrụ nchebe kacha. Uzo ndi a bu:
Ifyingchọpụta ihe egwu na ọghọm dị na ya; iwu izizi ichebe ndị ọrụ ịnọnyere gị bụ ịchọpụta ihe egwu na nsogbu niile nwere ike ibilite. E kere ha ụzọ abụọ:
Ihe ọghọm gburugburu ebe obibi: ihe egwu ndị a nwere ike ịgụnye ọrịa metụtara ahụike niile nke nwere ike ibute ọrịa dịka ọrịa obi, ọgbụgbọ na bumps ma ọ bụ ọrịa ọ bụla ọzọ nwere ike ịchọ nlekọta ahụike ozugbo. Ihe ize ndụ ndị a nwekwara ike ịgụnye ụdị obi erughị ala, ọdịda, njem na ụfọdụ iyi egwu ndị ọzọ enwere ike ịhụ dịka ọnọdụ mmadụ.
Nsogbu mmekọrịta ọha na eze: ihe ize ndụ mmekọrịta bụ ụdị ihe egwu kachasị nke ndị ọrụ na-eche ihu. Ebe ọ bụ na ndị ọrụ ahụ na-emekọrịta ihe na ndị dị iche iche kwa ụbọchị enwere ike ịnwe ndị ohi, mwakpo anụ ahụ, mwakpo mmekọahụ ma ọ bụ ọbụna ọgụ uche. Obu ihe kwere omume ikwenye onye obula zutere n ’oru.
Assessmentme nyocha nke ndị ọrụ naanị ha; ka ụlọ ọrụ wee lụso ihe ọgụ ọgụ nwere ike iche ihu, a ga-enwerịrị usoro ọmụmụ ihe. Ọ nwere ike ịgụnye inwe ajụjụ dị iche iche na itinye azịza ha. Ajuju dika:
Ha ga - arụ ọrụ gụnyere njikwa akwụkwọ ọ bụla?
Womenmụ nwanyị nọ n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ naanị?
Ọrụ ahụ ọ ga-agụnye ijikwa ire ọkụ gbara ọtọ?
A ga-egbu ọrụ ahụ site n'ebe dị elu?
Ọrụ a gụnyere ịnweta ma ọ bụ ịkpọtụrụ ụmụ anụmanụ?
Site n'ịza ajụjụ ndị a, ụlọ ọrụ na-enwe ike ịmata ihe ọghọm gụnyere ma lelee ha site na itinye usoro
Ọzụzụ ndị ọrụ naanị ya na ndị nlekọta; Inwe ọzụzụ zuru oke dị oke mkpa ka ndị ọrụ na-adị njikere iji dozie nsogbu ma mee ngwa ngwa. Ọzụzụ a nwere ike ịgụnye: ịkọwa ihe egwu dị na arụ ọrụ, ọzụzụ enyemaka mbụ, ọzụzụ ịnya ụgbọ ala na ndị ọrụ ọzụzụ ka esi eji igwe arụ ọrụ nke ọma.
Itinye iwu eji arụ ọrụ naanị otu; ndị a na - enyere aka idobe ma ndị ọrụ ma akụ. Iwu ndị ọrụ na-adịbeghị anya kwesịrị ịgba akwụkwọ n'ihi na ha na-enye aka na gburugburu ebe ọrụ dị nchebe. Ha na-ewulitekwa usoro maka nyocha ihe egwu nke ndị ọrụ nwere ike itinye aka na ya.
Gbaa ume na nkwado n'etiti ndị ọrụ naanị ya na ndị ọrụ njikwa; Ọ dị mkpa na oge ọ bụla oge ka ndị ọrụ na-ahụ maka njikwa maara ọnọdụ na ọrụ nke ndị ọrụ owu. Nke a bụ iji hụ na ha nwere ike nyochaa ha ma gakwuru mgbe nsogbu dị. N'oge a, ọ dị mkpa na ha nwere sistemụ ndozi ọrụ.
Inye ngwa oru kachasi nma ndi oru; equippedbụ onye a kwadebere nke ọma pụtara na maka onye ọrụ naanị ya, ọ gaghị enwe ike ịrụ ọrụ ya nke ọma mana ọ ga-enwe ahụike ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ na-arụ ọrụ nke kacha mma.
Tinye ego na sistemụ ndozi ọrụ; Usoro onye ọrụ naanị ya bụ usoro mmemme kọmputa ma ọ bụ ikekwe ngwakọta nke ngwa nke na-enyere aka azụmaahịa azụmaahịa ma jikwaa ndị ọrụ naanị mgbe ha na-ama ọnọdụ ha na-eme ka mmadụ daa na njikere. Ha na-agbafe gam akporo, IOS na nyiwe weebụ.
Taa, teknụzụ emetụtala akụkụ dị ukwuu nke ndụ anyị, ndị mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ugbu a site na iji ngwaọrụ ndị dị elu iji mee ka usoro ọrụ dịkwuo n'okpuru arụmọrụ zuru oke. Usoro nlezianya nke onye ọrụ bụ nnukwu teknụzụ nke na - enyere ụlọ ọrụ aka dị ukwuu. Ugbu a ụlọ ọrụ nwere ike na-eme ịzụta nke ngwaọrụ ndị a ma mejuputa ha. Uru ya bụ:
Ndekọ akụkọ ihe mere eme
Mmekọrịta ngwa ngwa na nkwukọrịta
Dịka ụlọ ọrụ ọ dị mkpa ị attentiona ntị na ndị ọrụ ma hụ na nchekwa ha. Ndị ọrụ na-enweghị ebe adịghị ike ma bụrụ ndị ejiri nlezianya nyochaa, iHelp bụ naanị ihe ịchọrọ iji chebe ndị ọrụ gị. Site na ụfọdụ njirimara ndị a dị mkpa, iHelp na-eme ka ndị ọrụ nwee nchebe ka ha na-enyere ndị ọrụ aka inyocha ha. Enyemaka ahụ bụ otu ihe eji eme ka okpukpu abụọ na-arụ ọrụ, ngwaọrụ mere iji hụ na ndị ọrụ na-echekwa nchebe naanị. Featuresfọdụ atụmatụ igodo o nwere bụ:
ntinye uzo; Nke a na - eme ka ọ dị mfe iji soro ọnọdụ ndị ọrụ mgbe niile na GPS
Nchọpụta ọdịda; ya na ụfọdụ ndị mmetụta otu oge daa ọdịda na-eziga mkpu na ndị na-akwado otu
Ụzọ nkwukọrịta; ọ ga - ekwe omume ka gị na onye ọrụ a nwee nhọrọ
njiri mara mmiri; ọbụlagodi na mmiri, ngwaọrụ a ka na-arụ ọrụ nke ọma
Single pịa bọtịnụ ọkpụkpọ SOS; jiri otu imechi bọtịnụ a nwere ike izipu mkpu na ndị otu na-akwado ya
Ngwa mkpanaka efu; dị maka gam akporo na IOS.
Maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ngalaba kachasị dị ize ndụ dịka owuwu, ihe ndị sitere n'okike, ahụike, mmanye ma ọ bụ ọbụna ụgbọ njem. Ngwaọrụ iHelp na-enye ndị ọrụ nchekwa ihe nchekwa nchekwa zuru ezu iji hụ na ndị ọrụ na-adịghị ize ndụ oge niile yana mgbe ha nọ n'ihe ize ndụ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ maara ma nwee ike izipu enyemaka ozugbo.
Nzuzo 2913 19 Echiche Taa